Apple nilavo lefona ary nandao ny orinasan'ny dokambarotra | Vaovao IPhone
Apple nilavo lefona ary nandao ny orinasa dokambarotra
Rehefa miresaka momba ny fiainana manokana isika dia matetika miresaka momba ny maodelin'ny orinasan'ny orinasa toa ny Facebook na Google. Ireo orinasa ireo dia mamorona piraofilina mifototra amin'ny safidintsika hanomezana anay doka manokana. Apple Tsy mbola nanao zavatra mitovy amin'izany izy, saingy manana sehatra fanaovana dokam-barotra tompony izay mahazo ny anaran'ny iAd. Rehefa mipoitra amin'ny fampiharana iOS ny dokam-barotra, ohatra, Apple dia mangataka 30% ny tombom-barotra vokariny, mitovy ny isan-jato angatahiny amin'ny serivisy maro hafa. Saingy tamin'ity herinandro ity dia efa nilavo lefona izy ary tsy te handre intsony momba ny fitadiavam-bola amin'ny doka.
Araka ny voalazan'i John Paczkowski an'i BuzzFeed, izay mitanisa loharanom-pahalalana momba an'io, Apple dia mikasa ny hifindra amin'ny sehatra mandeha ho azy kokoa izay ny mpitory no mandray an-tanana ny fampiakarana mavesatra. Nilaza i Paczkowski, nisy olona tao amin'ny Apple nilaza fa “Tsy zavatra hainay tsara izany ary izany no mahatonga an'i Apple mamela ny famoronana, ny varotra ary ny fitantanana ny dokambarotra iAd amin'ireo olona manao tsara indrindra: mpanonta.«. Ireo izay ao amin'ny Cupertino dia hanavao ny fitaovany iAd sy rindrambaiko hahafahan'ireo mpanonta mivarotra izany mivantana.
Apple dia hiala tsikelikely amin'ny varotra iAd ary hanavao ny sehatra hahafahan'ny mpanonta mivarotra mivantana eo aminy. Ireo mpitory dia mitazona 100% ny zavatra vokariny. Tsy mazava ny dikan'izany amin'ny Tetikasa Rubicon, MediaMatch, ary orinasan-doka teknolojia hafa izay nanara-maso ny fandaharam-potoana, mandeha ho azy, na mitaky ny hividy doka amin'ny sehatra, saingy tsy dia tsara izany. Raha azo atao mivantana amin'ny alàlan'ny sehatra iAd nohavaozina ny zava-drehetra dia azo atao tsara ny manao ny ankamaroany. […] Hitranga tsy ho ela ny hetsika, angamba mandritra ity herinandro ity.
Steve Jobs no tompon'andraikitra tamin'ny fanolorana ny iAd ao amin'ny Keynote nanolorana azy koa ny iOS 4. Tamin'ny voalohany dia toa nanana ho avy tsara izy, fa "mpanao kiraro, amin'ny kiraronao." Ary ny Apple ve tsy afaka mifaninana amin'ny Google sy Facebook mihitsy eo amin'ny sehatry ny doka. Ny fialana ara-potoana dia fandresena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple nilavo lefona ary nandao ny orinasa dokambarotra
Ny dokam-barotra izay miseho amin'ny fampiharana dia isan-jato ho an'i Apple ary iray hafa ho an'ny mpamorona ny fampiharana, sa tsy izany? Raha tsy mitazona an'io isan-jato io i Apple, midika ve izany fa ny mpamorona ny fampiharana dia handray ny zava-drehetra ary noho izany dia mety hampihena ny vidin'ny fampiharana azy sa midika izany fa io isan-jato nalain'i Apple io dia horaisin'ny orinasa hafa? Mamelà ny tsy fahalalana.
Ny Paid Apps dia matetika tsy manana doka, noho izany indrindra no antony, mba tsy hananana tsipika fanaovana dokam-barotra manahirana manaisotra toerana amin'ny efijery.
Matetika izany dia natao ho an'ny fampiharana maimaim-poana, araka ny nolazaina anao. Tsy hahita na inona na inona izahay. Hahazo vola bebe kokoa ny mpandraharaha.
Azo antoka dia hoy izy:
"Rehefa miresaka momba ny fiainana manokana" angamba, dokam-barotra?
Valio ny fisalasalana
Salama, fisalasalana. Tsia, tsiambaratelo izany. Saika rehefa miresaka momba ny fiainana manokana isika dia miresaka momba ny Facebook na Google satria fantatr'izy ireo ny momba antsika rehetra mba hanolorana dokam-barotra manokana. Ny hoe "fantatr'izy ireo ny zavatra rehetra" izay tsy manaja ny fiainantsika manokana.
Steve Jobs Nahazo fanendrena Hollywood Oscars 2
Mampiasa angona sandoka ny olon-dratsy mba hividianana fitaovana Apple $ 16.000